Usuku: Ngomhla we-12 kuDisemba ngo-2019
IDenizli Izmir yoQeqeshiso lweMephu yamaxesha kunye namaxabiso eTikiti: I-Izmir Basmane I-Denizli yoLoliwe weSithili iqhutywa yiTCDD yothutho. [More ...]
Canal Istanbul Project: Iiprojekthi mega Channel Istanbul Turkey ziyaqhubeka ukuthatha indawo uphuhliso-ngomzuzu wokugqibela kule projekthi. Ngelixa amaxhoba eKanal Istanbul elinde owona mhla uza kubhengezwa ngawo kule projekthi, umhla wokumba wokuqala [More ...]
Intlanganiso ye-TCDD ka-2019/2 ye-GCC yabanjwa
ICandelo loMlawuli Jikelele le-TCDD, uSekela Mphathi Jikelele we-İsmail Çağlar IBhodi yokuLawula i-Ofisi kaMongameli (GCC) yeGosa eliGunyazisiweyo lezoRhwebo lezoThutho-uSenabasebenzi baxoxwa. Ikhomishini isebenze kwizibonelelo zeGosa lezoThutho-uSen [More ...]
Amawakawaka e-6 asebenza eSivas Ankara kwiSantya soLwakhiwo loLoliwe
Iprojekthi yeSivas Ankara High Speed ​​Projekthi, kulindeleke ukuba igqitywe ixesha elide, ifikile esiphelweni. U-Abdullah Peker, uSihlalo woMbutho wabaThutho kunye nooLoliwe, uxelele iinkampani zabakhi ukuba [More ...]
I-BOTAŞ iphumelele ithenda yokuNyusa uMthombo woGcino lweNdalo kwiCholine; Kwiveki ephelileyo, iBOTAŞ yenze ithenda yezigidi ezi-4,5 zeepawundi. Iinkampani zaseKolin naseKalyon zithathe inxaxheba kwithenda enkulu yeBOTAŞ kwiveki ephelileyo. [More ...]
Ikomkhulu Qatar Hamad Airport project ukwandiswa imisebenzi yokwakha e Doha, waphumelela yamaqumrhu TAV nayo efumaneka kulwakhiwo, kuquka Turkey. I-TaV Consortium, i-MIDMAC kunye ne-Taisei Corporation JV [More ...]
UMphathiswa u-Turhan, u-İbiş kunye no-Altun kwintetho yakhe e-ofisini yakhe, "Turk Telekom Tam O An" kunyaka ophelileyo, iifoto zomboniso obonwe ufanelekile ukuboniswa, i-Ankara University Faculty yoNxibelelwano ithe. isithembiso [More ...]
Iparadesi emhlophe iPamukkale, emva koko yiparadesi yesibini emhlophe yesi sixeko, iZiko leDenizli Ski, liye lajika laba mhlophe. Umasipala waseDenizli Metropolitan ugqibezela onke amalungiselelo wokubamba iindwendwe, ukuvulwa kwexesha le-ski ukuya kubukhulu beqhwa elifunekayo [More ...]
Uqeqesho loMlilo kwaBaqhubi beZothutho loLuntu kwiCandelo lezothutho laseSakarya; Uqeqesho lomlilo lwabonelelwa kubaqhubi beebhasi abakhonza kwiSebe lezoThutho. Amanyathelo anokuthathwa ngokuchasene nemililo kunye nokunokwenziwa ngexesha lomlilo [More ...]
Ukuhamba ngesithuthi esivela kwi-KBU Rail Systems Club Club Utyelelo kwiPaki; EzothuthoPark A.Ş., incedisi kaMasipala waseKocaeli Metropolitan, ibibambe abafundi be40 abavela kwiYunivesithi yaseKarabük Rail Systems ukuze babelane ngamava abo kwiinkqubo zikaloliwe. [More ...]
Turkey kaThixo zokuhamba ibhayisekile yangoku kuwo onke amaphondo, iindlela ibhayisekile ukuba isetyenziselwe iinjongo ezifana ukubonelela navigation kunye nocwangciso ezemidlalo kunye yokupaka ibhayisekile, inkqubo imigaqo uyilo kunye nolwakhiwo kwakhona sizimisele [More ...]
IMisebenzi yoMbane yoKwakha iiTekhnoloji zeZakhiwo eziza kwakhiwa Ngaphakathi kwinqanaba leProjekthi yokuSayinelwa iZinto ziya kwenziwa. [More ...]
Umasipala wase-Istanbul Metropolitan ucwangcise i “Maritime Workshop Hal ngomhla wama-564 weminyaka yee-Haliç Shipyard. Ukuthetha kwiworkshop. UCemal Saydam uthe, "Iimitha zokuqala ezingama-25 zoLwandle iMarmara luLwandle Olumnyama kwaye ngezantsi kukho amanzi anetyiwa aseMeditera. Olu lwakhiwo [More ...]
Namhlanje kwimbali: I-22 kaJanuwari 1856 i-Alexandria-Cairo umgca